Repoblika Federalin’i Alemaina : Nanome 65 tapitrisa Euros an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaRepoblika Federalin’i Alemaina : Nanome 65 tapitrisa Euros an’i Madagasikara
16/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manao tohivakana ny fanampiana avy amin’ireo firenena vahiny. Tontosa omaly, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny (MAE), tao amin’ny efitrano fifanarahana, ny fifanaovan-tsoniam-pifanarahana teo amin’ny Fanjakana malagasy tamin’ny alalan’ny minisitry ny MAE, Henry Rabary-Njaka, ankilany, sy ny Fanjakana alemaina tamin’ny alalan’ny masoivohony monina sy miasa eto, Harld Gehrig, andaniny.
Fifanarahana goavana miisa folo no indray nosoniavin’ny roa tonta tamin’izany. Voalaza fa mitentina 65 tapitrisa Euros ity fifanarahan’ny firenena roa tonta ity. Raha ny fanazavana, fifanarahana efa vita sy tontosa ny faran’ny taona 2016 ity natao sonia omaly ity.
Araka izany, tamin’ny alalan’ny fifandresen-dahatra niraisan’ny governemanta alemaina sy malagasy no nahafahana nametraka ny fampiasana io vola io amin’ny alalan’ny fametrahana ilay fandaharan’asa vaovao eo amin’ny fiaraha-miasa eto Madagasikara, eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana, ny jono, ny angovo, ary ny fitsinjaram-pahefana.
Tafiditra amin’izany ihany koa, ary sambany ny fametrahana fandaharan’asa ho amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fampifanarahana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Raha araka ny fanirian’ny governemanta malagasy, dia hampiharina any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara io fandaharan’asa vaovao io. Izany no atao amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny “chaînes de valeurs”, ohatra, eo amin’ny sehatry ny tantely, ny tsaramaso, sns. Mba hampitomboana ny vokatra, ka mba hisian’ny tamberina amin’ny alalan’ny fisian’ny tombony tsara ho an’ny mponina izay tena sahirana.
Manaraka izany, hisy ihany koa amin’ny alalan’io fandaharan’asa vaovao io ny tetikasa vaovao eo amin’ny fiompiana trondro sy ny sehatry ny jono nentim-paharazana, izay hapetraka ho fanatsarana hatrany ny fanjarian-tsakafo, ary ahafahana mitantana ara-drariny ny vokatra misy eo amin’ny faritra.
Ankoatra izay, voalaza fa tanjon’ny fiaraha-miasa alemà amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny hiady amin’ny fahantrana, ka hisian’ny fifanarahana mivelatra eo amin’ny governemanta sy ny vahoaka malagasy. Tafiditra amin’izany ny fanajana sy fiarovana ny harena voajanahary tokana eto Madagasikara, izay mahatratra 5% amin’ny harena voajanahary maneran-tany.
Nambaran’ny masoivoho alemà, Harald Gehrig, fa efa mahatratra 135 taona ny fifandraisana nisy teo amin’i Alemaina sy Madagasikara. Voalaza fa nanamarika izany ny fisian’ny fifanohizana andraikitra sy ny fitokisana iraisana sy mitovy.